မြန်မာ့အရေး အချိန်မီတွေ့ဆုံဖြေရှင်းဖို့ လေ့လာသူများတိုက်တွန်း — မြန်မာဌာန
၂ဝ၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ရန်ကုန်မြို့မြှ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးကို တွေ့ရစဉ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအနေအထားဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကြားက ပဋိပက္ခအခြေအနေကို ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့ ဒစ်ပလိုမက် သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
စစ်တပ်အာဏာသိမ်း အပြီး တနှစ်ကာလအတွင်း အပြောင်းအလဲတချို့ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ လေ့လာသုံးသပ်သူတွေ၊ သံတမန်တွေနဲ့ မူဝါဒချမှတ်သူတွေ ကြားမှာလည်း မြန်မာ့ပြဿနာ အဖြေရှာရေးဟာ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကြား ညှိနှိုင်းနိုင်ရေးအပေါ်တည်မှီနေတာဖြစ်ကြောင်း ရှုမြင်ပြောဆိုနေကြတာပါ။
ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အာဆီယံအထူးအစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဘုံသဘောတူညီချက် ငါးရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါတွေကတော့ “ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုတွေကို နှစ်ဖက်လုံးက အဆုံးသတ်ရေး၊ အင်အားစုအားလုံးနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီတွေ ပေးနိုင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံအထူးသံတမန် ခန့်အပ်ရေးနဲ့ အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံကို လာရောက်ရေး”တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာသုံးသပ်သူတစ်ဦးကတော့ - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း ရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာ စစ်တပ်အနေနဲ့ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်ရတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ၊ ပြည်သူ့နှလုံး မသိမ်းကြုံးနိုင်ခဲ့တာတွေကို ပြန်လည်အဖတ်ဆယ်ဖို့ ကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
မြန်မာ့အရှေ့တောင်အာရှ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအများစုကလည်း အဲဒီသဘောထားအမြင်အတိုင်းပဲ ရှိနေကြတာပါ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းရေး ဖော်ဆောင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ စစ်တပ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သူတွေကြား ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဖော်ဆောင်ဖို့ ဆော်ဩတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြန်တာနဲ့အတူ PDF ခေါ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ တပြည်လုံးမှာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ထောင်နဲ့ချီ တိုးပွားလာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအခါ စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ PDF တွေရဲ့ ပြောက်ကျားစစ်ဒဏ်ကို အလူးအလဲခံနေကြရတဲ့ သတင်းတွေ နေ့စဉ်လို ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ PDF တွေဟာ ရွေးကောက်ခံတရားဝင်အစိုးရကို အသိအမှတ်ပြု ကူညီနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ အများအားဖြင့် NUG အစိုးရရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ ရှိနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။
သပိတ်မှောက် အစိုးရဝန်ထမ်း လေးသိန်းဝန်းကျင်ကလည်း ဆက်လက်သပိတ်မှောက်နေကြဆဲဖြစ်ပြီး အခုအခါ ဝန်ထမ်းအတော်များများက NUG အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ မကွေးနဲ့ မန္တလေးဒေသတွေမှာ PDF တွေ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီး၊ NUG ရပ်ကျေးအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးလည်း ကျယ်ပြန့်စပြုလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
မကွေးတိုင်း အဆင့်မြင့် စစ်အရာရှိတဦးရဲ့ ပေါက်ကြားလာတဲ့ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ်အရ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းမှာလည်း အခြေအနေမကောင်းလှတာကို သိနေကြပြီး အကြပ်ရိုက်နေကြကြောင်း၊ အခုအခါ လက်လုပ် တူမီးသေနတ်တွေအများစုနဲ့ တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ PDF တွေကို စစ်တပ်က လေကြောင်းကနေ ပစ်ခတ်နေရတဲ့ အခြေအနေကို ဆိုက်ရောက်နေကြောင်း သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ စစ်တပ်ကလည်း မည်းမည်းမြင်ရာ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်နေတဲ့အတွက် အရပ်ဘက်ပြည်သူအများ ထိခိုက် သေဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒီအတွင်း စစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုနောက်ဆုံး ဖေဖော်ဝါရီ လ ၁ ရက် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းခဲ့ပြန်ပြီးတဲ့နောက် ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေက အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကတော့ အဲဒီ ဖွဲစည်းခဲ့တဲ့အစိုးရကို၊ တရားဝင် အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုဖို့ NUG က၊ ဂျပန်အစိုးရထံ စာရေး ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ နီးစပ်တဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တွေက ပြောဆိုကြောင်း Japan Times သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Fumio Kishida နဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Yoshimasa Hayashi ထံ လိပ်မူပေးပို့ခဲ့တဲ့ အဲဒီစာမှာ၊ shadow government ခေါ် ရွေးချယ်ခံ အတိုက်အခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အနေနဲ့၊ မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရရဲ့ ဩဇာအာဏာအောက်မှာ ရှိနေတဲ့ တိုကျို မြန်မာသံရုံးနဲ့အပြိုင် မြန်မာကိုယ်စားလှယ် ရုံးတစ်ရုံး ထူထောင်ဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်းလည်း ဖော်ပြပါတယ်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဗြိတိန်နဲ့ တောင်ကိုရီးယား အပါအဝင် တခြားနိုင်ငံအတော်များများမှာ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတွေ ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်အနေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် မရှိသလို အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေနဲ့လည်း ခပ်ကင်းကင်းနေနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အ‌ကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးကလည်း NUG အနေနဲ့ တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ မျှော်လင့်စရာမရှိကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။ ဂျပန်အစိုးရထံပေးပို့ခဲ့တဲ့ စာ ရမရ လည်း ဖြေကြားဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
Japan Government is not good for Myanmar & People for current case. I suggest Japan Gov. need to meet with NUG that represent of Myanmar People. Soon, Military Regime will destroy from against of Myanmar People. We do not accept Military Coup and Regime Gov. We will win for Democracy & Human Right. Myanmar People do not miss second World War Case about Japan and current condition.